မယားပြိုင်အဖြစ် ဆက်စပ်နိုင်မည့် အိမ်မြေကို ၀ယ်မိလျှင် - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
မယားပြိုင်အဖြစ် ဆက်စပ်နိုင်မည့် အိမ်မြေကို ၀ယ်မိလျှင်
14 Aug 2019 12:33 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
3958 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
''ဥပဒေအရ မယားပြိုင်ဆိုတာ ရှိပါသေးလား ဆရာ''
''ဦးသက်နိုင်ရောက်လာပြီဆိုရင် ထူးထူးဆန်းဆန်း ဇာတ်လမ်းတွေ ပါလာတတ်တယ်။ ကဲ ပြောပါဦးဗျာ''
ဦးသက်နိုင်မှာ အိမ် ခြံ မြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေ သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဦးသက်နိုင်လာရောက် ဆွေးနွေးပြီဆိုလျှင် အိမ် မြေ အရောင်းအဝယ်မှာ အခက်အခဲတစ်ခုရှိနေပြီဟု စာရေးသူနားလည် သဘောပေါက် ထားပါသည်။
''အိမ် မြေ အရောင်းအဝယ် ကိစ္စတစ်ခုမှာ မယားပြိုင်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ကန့်ကွက်လာလို့ ဆရာ''
''အိမ်မြေက ဘယ်သူ့အမည် ပေါက်လဲ''
''ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ပထမဇနီးရဲ့ အမည်ပေါက် ဆရာ''
''ဖခင်က ဘယ်နှစ်ကာလမှာ ကွယ်လွန်သွားတာလဲ''
''အခု ကျန်ခဲ့တဲ့ သားသမီး သုံးဦးက ရောင်းမှာပေါ့''
''ဝယ်သူနဲ့ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးမှ သူက မယားပြိုင်တစ်ယောက်ပါဆိုပြီး အဲဒီအိမ်မြေကို အရောင်းအဝယ် လွှဲပြောင်းပေးကမ်းပေါ့ ဆရာ။ မလုပ်ဖို့ တားမြစ်ကြေညာတာ ဆရာ''
''သားသမီးတွေက ဖခင်နောက် အိမ်ထောင်ပြုထားတာ မသိဘူးလား''
''သိတော့ သိတယ်။ အတူနေတာ မဟုတ်တော့ မသိသလိုပဲနေကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဆက်အဆံလည်း မရှိကြဘူး''
''ပထမ ဇနီးကွယ်လွန်သွားတော့ ဖခင်က ဘယ်မှာနေသလဲ''
''ကွယ်လွန်တဲ့အထိ သမီးတွေနဲ့ အတူနေခဲ့တယ်လို့ ပြောတယ်''
''နောက်ဇနီးကိုတော့ အဝေးက ထောက်ပံ့နေတဲ့သဘောပေါ့။ နောက်ဇနီးနဲ့ ဖခင်က သားသမီးကျန်ခဲ့သေး လား''
''နာရေး ကြော်ငြာစာမှာ ဒုတိယ ဇနီးအမည်ထည့်တာ ရှိ မရှိ ဘာသိ သေးသလဲ''
''အဲဒါတော့ ကျွန်တော်သေချာ မမေးလိုက်မိဘူး။ ဖခင်ဖြစ်သူက နိုင်ငံခြား သင်္ဘောကုမ္ပဏီမှာလုပ်တာဆိုတော့ နိုင်ငံခြားမှာ အနေများတယ်လို့ သိရတယ်။ ကျွန်တော် သိချင်တာက ယခုကာလမှာ မယားပြိုင်ဆိုတာ မရှိတော့ ဘူး မဟုတ်လား''
''၂ဝ၁၅ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ပိုင်း မှာတော့ မယားပြိုင်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ယင်းဥပဒေနဲ့ ပုဒ်မ (၁၉) မှာ ဤဥပဒေ အာဏာမတည် မီက တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာအရဖြစ်စေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရဖြစ်စေ၊ တရားဝင် အတည်ဖြစ်သည့် ထိမ်းမြားခြင်းကို ဤဥပဒေအရ မထိခိုက်စေရလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်''
''ဒါဆိုရင် မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ မယားအများယူပိုင်ခွင့်က ဒီဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းမီဖြစ်လို့ အတည်ဖြစ်တဲ့ သဘောပေါ့''
''မှန်ပါတယ်။ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ၊ ၃၁ ရက်မတိုင်မီက လက် ထပ်ထားတဲ့ ဇနီးများအနေနဲ့ မယားပြိုင် အခွင့်အရေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်''
''တရားဝင်ဇနီးအဖြစ် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ကျော်စောခြင်းတော့ ရှိရမှာပေါ့နော်''
''မှန်ပါတယ်။ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံး တမ်းဥပဒေအရ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း တရားဝင်စေရန်အတွက် မည်သည့်အ ခမ်းအနားမှမလို၊ တရားဥပဒေအရ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် အခမ်းအနားဟုမရှိ။ ကာယကံရှင် နှစ်ဦးလင်မ ယားအဖြစ် အထင်အရှား ပေါင်းသင်းနေထိုင်ဆက်ဆံမှုမျိုးကို ဆိုလိုသည်။ ရပ်ရွာမှ ဇနီးမောင်နှံအဖြစ် အသိအ မှတ်ပြု ဆက်ဆံကြောင်း ထင်ရှားစေရမည်လို့ မောင်မောင်နှင့် မစိန်ကြည် ၁၉၄ဝ ရန်ကုန် စီရင်ထုံး - စာမျက် နှာ ၅၆၂ မှာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လင်မယားဖြစ်ကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင် မိတ်ဆွေ အသိုင်းအဝိုင်းက အသိအမှတ်ပြုထားဖို့ လိုပါတယ်''
''တရားဝင် လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းခဲ့ခြင်းမဟုတ်လျှင် အမွေရပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ ယခင်မြန်မာ့ ဓလေ့ထုံး တမ်းဥပဒေမှာရှိပါသလား''
''လင်မယားအဖြစ် ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် နေထိုင်ကြခြင်းမရှိဘဲ အတူပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ကြ ပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်သေဆုံး၍ ၎င်း၏ အထင်အရှားမယားမှလွဲပြီး အခြားမိန်းမတစ်ဦးက ၎င်းမှာ လည်း သေဆုံးသူ၏ မယားဖြစ်သည်ဆိုပြီး အမွေတောင်းဆိုလျှင် ထိုမိန်းမသည် သေသူ၏ မယားဖြစ်ကြောင်း တရား ဥပဒေနှင့်အညီ ယုံမှားသံသယကင်း လောက်အောင် သက်သေထင်ရှားပြရမည်လို့ Ma Hla Miv Vs Maung Hla.U.A.I.R (All-India Reports 1936. Rangoon-Page 115) မှာ အတိအလင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး မရမီကတည်းက အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ တရားလွှတ်တော်မှ ဆုံးဖြတ်ချက် အရပင် မယားပြိုင်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားခိုင်လုံစွာ တင်ပြဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်''
''ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဆရာ၊ အခုလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ မှာလည်း တရားမဝင် ဇနီးအနေနဲ့ အမွေဆုံးရှုံးခွင့် ဘယ်လို ပြဋ္ဌာန်းထားပါသလဲ''
''တစ်လင်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ (၁ဝ) မှာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ၊ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအရဖြစ်စေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရဖြစ်စေ လင်နှင့်မယား တစ်ဦးသို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပို၍ တရားဝင် ထိမ်းမြားပြီးသည့် ယောက်ျား သို့မဟုတ် မိန်းမသည် အဆိုပါ ထိမ်းမြားမှုတည်မြဲနေစဉ်ကာလအတွင်း ဤ ဥပဒေအာဏာတည်သည့်နေ့မှစ၍ အခြားသူတစ်ဦးနှင့် ထပ်မံ ထိမ်းမြားခြင်းမပြုရ၊ သို့မဟုတ် လင်မယားအဖြစ် တရားမဝင် နေထိုင်ပေါင်းသင်းခြင်း မပြုရလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်''
''တရားမဝင် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ရင် အမွေရခွင့်မရှိလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါသလား''
''ဟုတ်ပါတယ်။ ရှင်းအောင်ပြောရရင် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ - (၁၆) မှာ ယောက်ျားတစ်ဦးသည် ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရဖြစ်စေ၊ ထိမ်းမြားမှု အတည်ဖြစ်နေစဉ် ထပ်မံထိမ်းမြားခြင်းသည်လည်း တရားမဝင်ထိမ်းမြားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒါအပြင် နောက်မိန်းမသည် ထိုယောက်ျား၏ အမွေ ကိုဆက်ခံခွင့်မရှိစေရလို့ ဖော်ပြထားသည့်အပြင် နောက်မိန်းမယူသည့် ယောက်ျားသည် ပထမမိန်းမနှင့် နောက်မိန်းမတို့၏ အမွေကို ဆက်ခံခွင့်မရှိလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်''
''ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ။ ယခုကိစ္စမှာ မယားပြိုင်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားမပြနိုင်ရင်တော့ အမွေဆက်ခံခွင့်ရမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အမွေမှုများဖြစ်နိုင်သလား ဆရာ''
''ဒါတော့ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းလို့ ပြေလည်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ''ဟု ဆွေးနွေးလိုက်ပါသည်။
''ဥပဒအေရ မယားပွိုငျဆိုတာ ရှိပါသေးလား ဆရာ''
''ဦးသကျနိုငျရောကျလာပွီဆိုရငျ ထူးထူးဆနျးဆနျး ဇာတျလမျးတှေ ပါလာတတျတယျ။ ကဲ ပွောပါဦးဗြာ''
''အိမျ မွေ အရောငျးအဝယျ ကိစ်စတဈခုမှာ မယားပွိုငျဆိုတဲ့ သဘောမြိုး ကနျ့ကှကျလာလို့ ဆရာ''
''အိမျမွကေ ဘယျသူ့အမညျ ပေါကျလဲ''
''ကှယျလှနျသှားတဲ့ ပထမဇနီးရဲ့ အမညျပေါကျ ဆရာ''
''ဖခငျက ဘယျနှဈကာလမှာ ကှယျလှနျသှားတာလဲ''
''အခု ကနျြခဲ့တဲ့ သားသမီး သုံးဦးက ရောငျးမှာပေါ့''
''ဝယျသူနဲ့ တတေ့ဆေို့ငျဆိုငျဖွဈပွီးမှ သူက မယားပွိုငျတဈယောကျပါဆိုပွီး အဲဒီအိမျမွကေို အရောငျးအဝယျ လှဲပွောငျးပေးကမျးပေါ့ ဆရာ။ မလုပျဖို့ တားမွဈကွညောတာ ဆရာ''
''သားသမီးတှကေ ဖခငျနောကျ အိမျထောငျပွုထားတာ မသိဘူးလား''
''သိတော့ သိတယျ။ အတူနတော မဟုတျတော့ မသိသလိုပဲနကွေတယျလို့ ပွောပါတယျ။ အဆကျအဆံလညျး မရှိကွဘူး''
''ပထမ ဇနီးကှယျလှနျသှားတော့ ဖခငျက ဘယျမှာနသေလဲ''
''ကှယျလှနျတဲ့အထိ သမီးတှနေဲ့ အတူနခေဲ့တယျလို့ ပွောတယျ''
''နောကျဇနီးကိုတော့ အဝေးက ထောကျပံ့နတေဲ့သဘောပေါ့။ နောကျဇနီးနဲ့ ဖခငျက သားသမီးကနျြခဲ့သေး လား''
''နာရေး ကွျောငွာစာမှာ ဒုတိယ ဇနီးအမညျထညျ့တာ ရှိ မရှိ ဘာသိ သေးသလဲ''
''အဲဒါတော့ ကြှနျတျောသခြော မမေးလိုကျမိဘူး။ ဖခငျဖွဈသူက နိုငျငံခွား သင်ျဘောကုမ်ပဏီမှာလုပျတာဆိုတော့ နိုငျငံခွားမှာ အနမြေားတယျလို့ သိရတယျ။ ကြှနျတျော သိခငျြတာက ယခုကာလမှာ မယားပွိုငျဆိုတာ မရှိတော့ ဘူး မဟုတျလား''
''၂ဝ၁၅ ခုနှဈက ပွဋ်ဌာနျးခဲ့တဲ့ တဈလငျတဈမယားစနဈကငျြ့သုံးခွငျးဆိုငျရာ ဥပဒပွေဋ်ဌာနျးပွီးနောကျပိုငျး မှာတော့ မယားပွိုငျဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ ဒါပမေယျ့ ယငျးဥပဒနေဲ့ ပုဒျမ (၁၉) မှာ ဤဥပဒေ အာဏာမတညျ မီက တညျဆဲဥပဒတေဈရပျရပျအရဖွဈစေ၊ ကိုးကှယျရာဘာသာအရဖွဈစေ၊ ဓလထေုံ့းတမျးအရဖွဈစေ၊ တရားဝငျ အတညျဖွဈသညျ့ ထိမျးမွားခွငျးကို ဤဥပဒအေရ မထိခိုကျစရေလို့ ပွဋ်ဌာနျးထားပါတယျ''
''ဒါဆိုရငျ မွနျမာ့ဓလထေုံ့းတမျးအရ မယားအမြားယူပိုငျခှငျ့က ဒီဥပဒမေပွဋ်ဌာနျးမီဖွဈလို့ အတညျဖွဈတဲ့ သဘောပေါ့''
''မှနျပါတယျ။ တဈလငျတဈမယားစနဈကငျြ့သုံးခွငျးဆိုငျရာ ဥပဒပွေဋ်ဌာနျးတဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုနှဈ သွဂုတျလ၊ ၃၁ ရကျမတိုငျမီက လကျ ထပျထားတဲ့ ဇနီးမြားအနနေဲ့ မယားပွိုငျ အခှငျ့အရေးရရှိမှာဖွဈပါတယျ''
''တရားဝငျဇနီးအဖွဈ ပေါငျးသငျးနထေိုငျခဲ့ကွောငျး ကြျောစောခွငျးတော့ ရှိရမှာပေါ့နျော''
''မှနျပါတယျ။ မွနျမာ့ဓလထေုံ့း တမျးဥပဒအေရ ထိမျးမွားလကျထပျခွငျး တရားဝငျစရေနျအတှကျ မညျသညျ့အ ခမျးအနားမှမလို၊ တရားဥပဒအေရ အသိအမှတျပွုထားသညျ့ အခမျးအနားဟုမရှိ။ ကာယကံရှငျ နှဈဦးလငျမ ယားအဖွဈ အထငျအရှား ပေါငျးသငျးနထေိုငျဆကျဆံမှုမြိုးကို ဆိုလိုသညျ။ ရပျရှာမှ ဇနီးမောငျနှံအဖွဈ အသိအ မှတျပွု ဆကျဆံကွောငျး ထငျရှားစရေမညျလို့ မောငျမောငျနှငျ့ မစိနျကွညျ ၁၉၄ဝ ရနျကုနျ စီရငျထုံး - စာမကျြ နှာ ၅၆၂ မှာ အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆို ဆုံးဖွတျထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လငျမယားဖွဈကွောငျး ပတျဝနျးကငျြ မိတျဆှေ အသိုငျးအဝိုငျးက အသိအမှတျပွုထားဖို့ လိုပါတယျ''
''တရားဝငျ လငျမယားအဖွဈ ပေါငျးသငျးခဲ့ခွငျးမဟုတျလြှငျ အမှရေပိုငျခှငျ့မရှိဘူးဆိုတာ ယခငျမွနျမာ့ ဓလထေုံ့း တမျးဥပဒမှောရှိပါသလား''
''လငျမယားအဖွဈ ထငျထငျပျေါပျေါ နထေိုငျကွခွငျးမရှိဘဲ အတူပေါငျးသငျးနထေိုငျကွတာမြိုးလညျး ရှိတတျကွ ပါတယျ။ ယောကျြားတဈယောကျသဆေုံး၍ ၎င်းငျး၏ အထငျအရှားမယားမှလှဲပွီး အခွားမိနျးမတဈဦးက ၎င်းငျးမှာ လညျး သဆေုံးသူ၏ မယားဖွဈသညျဆိုပွီး အမှတေောငျးဆိုလြှငျ ထိုမိနျးမသညျ သသေူ၏ မယားဖွဈကွောငျး တရား ဥပဒနှေငျ့အညီ ယုံမှားသံသယကငျး လောကျအောငျ သကျသထေငျရှားပွရမညျလို့ Ma Hla Miv Vs Maung Hla.U.A.I.R (All-India Reports 1936. Rangoon-Page 115) မှာ အတိအလငျး ဖျောပွထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံလှတျလပျရေး မရမီကတညျးက အိန်ဒိယမှာရှိတဲ့ တရားလှတျတျောမှ ဆုံးဖွတျခကျြ အရပငျ မယားပွိုငျဖွဈကွောငျး အထောကျအထားခိုငျလုံစှာ တငျပွဖို့လိုတယျဆိုတာ ထငျရှားနပေါတယျ''
''ဗဟုသုတအနနေဲ့ ဆရာ၊ အခုလကျရှိကငျြ့သုံးနတေဲ့ တဈလငျတဈမယားစနဈကငျြ့သုံးခွငျးဆိုငျရာ ဥပဒအေရ မှာလညျး တရားမဝငျ ဇနီးအနနေဲ့ အမှဆေုံးရှုံးခှငျ့ ဘယျလို ပွဋ်ဌာနျးထားပါသလဲ''
''တဈလငျမယားစနဈကငျြ့သုံးခွငျးဆိုငျရာ ဥပဒပေုဒျမ (၁ဝ) မှာ ဥပဒတေဈရပျရပျအရဖွဈစေ၊ ကိုးကှယျရာ ဘာသာအရဖွဈစေ၊ ဓလထေုံ့းတမျးအရဖွဈစေ လငျနှငျ့မယား တဈဦးသို့မဟုတျ တဈဦးထကျပို၍ တရားဝငျ ထိမျးမွားပွီးသညျ့ ယောကျြား သို့မဟုတျ မိနျးမသညျ အဆိုပါ ထိမျးမွားမှုတညျမွဲနစေဉျကာလအတှငျး ဤ ဥပဒအောဏာတညျသညျ့နမှေ့စ၍ အခွားသူတဈဦးနှငျ့ ထပျမံ ထိမျးမွားခွငျးမပွုရ၊ သို့မဟုတျ လငျမယားအဖွဈ တရားမဝငျ နထေိုငျပေါငျးသငျးခွငျး မပွုရလို့ ပွဋ်ဌာနျးထားပါတယျ''
''တရားမဝငျ ပေါငျးသငျးနထေိုငျရငျ အမှရေခှငျ့မရှိလို့ ပွဋ်ဌာနျးထားပါသလား''
''ဟုတျပါတယျ။ ရှငျးအောငျပွောရရငျ ယငျးဥပဒပေုဒျမ - (၁၆) မှာ ယောကျြားတဈဦးသညျ ဥပဒအေရဖွဈစေ၊ ကိုးကှယျရာဘာသာ၊ ဓလထေုံ့းတမျးအရဖွဈစေ၊ ထိမျးမွားမှု အတညျဖွဈနစေဉျ ထပျမံထိမျးမွားခွငျးသညျလညျး တရားမဝငျထိမျးမွားခွငျးဖွဈတယျလို့ ပွဋ်ဌာနျးထားပါတယျ။ ဒါအပွငျ နောကျမိနျးမသညျ ထိုယောကျြား၏ အမှေ ကိုဆကျခံခှငျ့မရှိစရေလို့ ဖျောပွထားသညျ့အပွငျ နောကျမိနျးမယူသညျ့ ယောကျြားသညျ ပထမမိနျးမနှငျ့ နောကျမိနျးမတို့၏ အမှကေို ဆကျခံခှငျ့မရှိလို့ ပွဋ်ဌာနျးထားပါတယျ''
''ဟုတျကဲ့ ဆရာ။ ယခုကိစ်စမှာ မယားပွိုငျဖွဈကွောငျး အထောကျအထားမပွနိုငျရငျတော့ အမှဆေကျခံခှငျ့ရမှာ မဟုတျတဲ့အတှကျ အမှမှေုမြားဖွဈနိုငျသလား ဆရာ''
''ဒါတော့ နှဈဖကျညှိနှိုငျးလို့ ပွလေညျရငျ အဆငျပွသှေားမှာပါ''ဟု ဆှေးနှေးလိုကျပါသညျ။
ဥပဒေ အိမ်ခြံမြေ ဗဟုသုတ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဇေယျသုခလမ်းရှိ ၆-လွှာ...
78 လမ်း 10 လမ်း ပေ 15 ပေ 40 အ ရောင်း သိန်း ၈၀၀
၅၅ လမ်း အနီး ဘုရင့်နောင့်အနီး ပေ ၁၅ ပေ ၄၀...
ရေမီး အပြည်အစုံ ၃၅ လမ်း ၈၄x ၈၆ ကြား အငှား တလ ၂သိန်း၅...